Heshiis ay Kismaayo ku Gaareen Kooxaha Burcadbadeeda iyo Shabaabka - Xogta KM | KEYDMEDIA ONLINE
Heshiis ay Kismaayo ku Gaareen Kooxaha Burcadbadeeda iyo Shabaabka - Xogta KM
Kismaayo (Keydmedia) - Ayadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay xeebaha magaalada Kismaayo ay ku soo badanayeen kooxaha burcadbadeed ee ka afduub taga xeebaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay kooxda burcadbadeeda iyo horjoogayaasha Shabaabka Kismaayo ay kala saxiixden heshiis aduun lacageed oo aad u badan bil kasta lagu siinayo kooxda Shabaabka.
Kooxaha burcadbadeeda ayaa waxaa ay fariisimo ay ka duulaan marka ay Maraakiibta iyo Doomaha ay soo afduubanayaan ay ka sameysteen xeebta Kibooro ee magaalada Kismaayo taasoo ay maalmihii ugu dambeeyay ay is hor istaag ay ku sameeyeen Maleeshiyaad ka tirsan Shabaabka iyagoona ku amray burcadbadeeda ay bixiyaan bil kasta lacagta laga rabo.
Isjiid jiid iyo wadahadlo dheer oo ay yeesheen horjoogayasha kooxda Shabaabka Kismaayo iyo horjoogayaasha burcadbadeeda kadib waxaa la isku afgaratay in kooxda burcadu ay bil kasta bixiyaan lacag dhan 65 Milion oo dollar (lixdan iyo Shan Mliyan oo Dollar) taasoo ka badan lacgta ay kooxda Shabaabka ay ka qaataan bil kasta dekadda caalamiga ah ee magaalada Kismaayo.
Arrintaan ayaa waxaa ay kooxda Shabaabku ka saacidi doontaa inay sii dagaalamaan mudo badan maadaama ay helayaan lacago badan oo ay ku dagaalamaan.
Xeebta Kibooro waa xeeb kamid ah xeebaha magaalada Kismaayo waxaana markii hore xeebta adeegsan jiray dhalinyarada kubadda cagta ciyaarta taasoo ay Shabaabku ka joojiyeen, waxaana xeebta hadda fariisin ka sameystay burcadbadeed Soomaali ah, ayadoona marka aad xeebta tagto aad arkeyso Doomaha yar yar ee dheereeya oo ay burcadu dusha ka saaranyihiin iyagoona ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan.
Warbaahinta Keydmedia.net waxaa ay idiin balanqaadeysaa inay idin so gudbiso wixii ku soo kordha Heshiiskaasi cusub ee ay Kismaayo ku gaareen kooxaha dhibaatada dalka ka wada ee Shabaab iyo Burcadbadeeda.